Ny Channel Inbound Call dia goavana ... ary untapped | Martech Zone
Alakamisy, Aprily 10, 2014 Zoma, Aprily 11, 2014 Douglas Karr
Indostria iray izay ambany karama indrindra ary fotoana lehibe ahazoan'ny mpivarotra ny fanarahana antso. Rehefa miha-mahazo vahana amin'ny finday ny finday avo lenta amin'ny famakiana mailaka, fikaroham-barotra ary fikarohana momba ny fividianana anay - olona maro kokoa no tsotra fotsiny fipihana ny nomeraon-telefaona hitan'izy ireo ao amin'ilay tranonkala. Ho an'ireo orinasa manao dokam-barotra manerana ny fantsom-baovao dia olana lehibe io satria diso ny filazan'izy ireo ilay fantsona mamorona antso, mitarika ary manova azy.
Manana mpanjifa manana an'ity olana ity izahay - manome ny nomeraon-telefaona mitovy amin'ny dokam-barotra amin'ny televiziona toa azy ireo amin'ny tranokalan'izy ireo, amin'ny dokambarotra nomerika, ary manerana ny atiny izay manafaka ny mpanjifa amin'ny loharanom-baovao marobe - manomboka amin'ny fikarohana ka hatramin'ny sosialy. Ny tsy marina ao anatiny dia hoe izay miantso ny laharana dia voatonona amin'ny doka amin'ny fahitalavitra - saingy tsy izany velively no izy.
Ity infographic ity dia avy amin'ny fiantsoana, sehatra mifototra amin'ny rahona izay manome fitantanana fampielezan-kevitra, fanondroana mazava, azo ampiharina Analytics ary fitaovana fanatsarana finday.
Tags: antso fanamelohanamiantso marketingmiantso automatique marketingfanaraha-maso antsoRindrambaiko fanaraha-maso Call inboundantso anatyinvocasalesforcefinday avo lenta
MassiveImpact: Tambajotra dokambarotra finday
Apr 14, 2014 amin'ny 8: 53 AM
Infographic mahafinaritra, Douglas! Tena zava-dehibe tokoa ny antso. Ny feo mafy indrindra (IMHO) dia ny finday tsy miova. Raha ny traikefako, raha manara-maso ny antso ianao dia miova ny finday. Ary miova fo tsara. Raha ny raharaham-barotra mifototra amin'ny serivisy, fantatr'izy ireo raha afaka mahazo fitarihana amin'ny telefaona izy ireo dia avo kokoa ny tahan'ny fiovam-po amin'ny varotra.